Joel Embiid Diki Yemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
musha Africa Joel Embiid Diki Yemwana Nhau Uye Untold Biography Chokwadi
CB inopa Nyaya Yakazara yeBasketball Star ine zita rezita “Maitiro acho". Yedu Joel Embiid Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ehe, munhu wese anoziva nezve ake anosekesa persona uye pasocial media kuvepo. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Joel Embiid's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Joel Embiid Nyaya Yemwana:
Joel Hans Embiid akazvarwa pazuva re16th munaKurume 1994 kuJaounde, guta guru reCameroon. Iye ndiye dangwe pavana vatatu akazvarwa kuna amai vake, Christine Embiid uye kuna baba vake, Thomas Embiid.
Nyika yeCameronia yedzinza rakasviba nemidzi yeCentral-African akakurira kuguta rake rekuzvarwa muYaounde kwaakakurira pamwe nevanun'una vake, Arthur Embiid (mukoma) naMuriel Embiid (hanzvadzi).
Kukura muYaounde muCameron, mudiki Embiid airatidzika kunge asina kuchekwa basketball. Aive ari mutambi wevolleyball uyo akashandisa chikamu chiri nani chehupenyu hwake hwepakutanga achitamba mutambo.
Joel Embiid Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kuda kwaEmbiid kwekutamba nevolleyball hakuna kunyora chero fomu yekupfura kwakasimba. Muchokwadi, yakazosvika pazere-nguva yakadzika mugore ra2009 paakachinja kutamba basketball. Kuvaka basa mu basketball rakanga risiri basa rekukwiridzira kuna Embiid uyo aive nehurefu nemaoko akadzidziswa kunongedza mabhora.
Chii chimwe? kukura kwematare ebasketball kuzvikoro nemapaki kwanga kusiri kwakasiyana zvakanyanya nezvakajairwa naEmbiid muvolleyball. Uyewo haana kupotsa kuona mambure nekusvetuka. Akakurumidza kutanga kuenzanisira mutambo wake wemitambo mushure meNBA Hall of Famer, Hakeem Olajuwon uye akatenda kuti mutambo uyu waizovimbisa masheya kwaari.
Joel Embiid Kurarama Kwepakutanga Hupenyu:
Chokwadi, basketball yaive nebasa rekutanga repamberi muhupfumi hwaEmbiid uyo akawanikwa naCameroonia NBA mutambi, kuMbah muMoute pamusasa webhasiketi. Akatungamirwa neMbah imwe Moute, Embiid akatamira kuUnited States kunoshanda kusvika pakuve nyanzvi muMitambo.
VERENGA Kevin Durant Vana Vechiitiko Plus Untold Biography Facts
Ndichiri kumatunhu, Embiid akatanga nekutamba basketball yechikoro paMontverde Academy uye shure kweizvozvo, The Rock School. Paakapedza kudzidza kubva kuThe Rock Chikoro Embiid akazvipira kuKansas kwaaizove nebasa rake rese repakoreji.
Joel Embiid Road To Fame Nyaya:
Kunyangwe Embiid aigara zvakanaka necasketball basketball, nguva yake kuKansas haigoni kutorwa senzvimbo yake yekuchinja mukurumbira. Iyo basketball sensation yakanga yatozivisa iyo 2014 NBA dhizaini uye yakasarudzwa nePhiladelphia 76ers apo nguva yakaoma yakazopedzisira yaiswa mukati.
Akarasikirwa nemunun'una wake uye iye oga Arthur muna Gumiguru 2014 uye akaenderera mberi nekukuvara kwehondo izvo zvakamuita kuti ashaiwe mu rookie chiitiko cheiyo yese 2014 / 2015 mwaka. Saizvozvo, tariro yake yakatorwazve pamusoro pemadziro yeiyo yese 2015 / 2016 mwaka nekuda kwekukonzeresa kupora.
Joel Embiid Vanosimuka Kuti Vane Mbiri Nhau:
Embiid akazopedzisira aonekera kune makumi manomwe neshanu panguva yemutambo wekukunda preseason neBoston Celtics uye akaenderera mberi nekuita yake NBA kutanga muna 76ers 'mwaka wekuvhura achipesana neOklahoma guta kutinhira musi wa76 Gumiguru 26.
Yakanga ichingova nyaya yemwedzi asati atanga kukiriniki honours izvo zvakamuona iye akatumidzwa muWorld Team yeiyo 2017 Rising Stars Challenge, Eastern Conference rookie yeMwedzi pakati pevamwe. Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora Embiid mutambi akasimudzwa we76ers uye akakwidziridzwa kuti ave chinotevera cheNBA mushure LeBron James.
Joel Embiid Hukama Hupenyu Chokwadi:
Akareba, akanaka uye akasviba Joel Embiid haana kubvira awanikwa achishayikwa mune humwe hwehupenyu hwake hwepamoyo kubva paakasimukira mukurumbira. Akabatanidzwa kune vanoverengeka vevakadzi vanozivikanwa vanosanganisira WAG chaiko nyota, Olivia Pierson uye muimbi weBarbadian Rihanna.
VERENGA Bukola Saraki Utano Hwokutanga Plus Untold Biography Facts
Nekudaro, hukama hwake chete hwakasimbiswa ndehwekudanana kwaanogovana nemuBrazil Swimsuit model Anne De Paula. Embiid anga achidanana munhu akaberekerwa kuRiodij puo kubvira 2018. Ivo duo vasina kana mwanakomana (kana mwanasikana) kunze kwemuchato vari kusimba muukama hwavo panguva yekunyora uye vanogona kutora chimiro chavo chepamusoro nekuroora.
Joel Embiid Hupenyu hweMhuri Chokwadi:
Embiid anokudza anobva mumhuri yepakati mhuri yemhuri. Ona zvese nezvehupenyu hwemhuri yake.
Nezve baba vaJoel Embiid: Thomas Embiid ndibaba vaJoel. Ivo baba vane rudo uye vaitsigira vaive mukuru wemauto panguva yekuzvarwa kwaEmbiid uye vaitamba bhora remaoko semutambo wekuvaraidza. Thomas akadyara zvakadzama muCameron uko maEmbiid vane mhuri yavo uye vanoshevedza nyika yekumba.
Nezve amai vaJoel Embiid: Christine Embiid ndiamai vaJoel uye mbiru inotsigira yehupenyu hwake kufambira mberi. Kunyangwe Christine pakutanga aida Embiid kuti ave chiremba, aisakwanisa kubatsira kutsigira zvishuwo zvake zvakasiyana kubva pakurota kwekutamba volleyball muEurope kusvika pakushanda kusvika kuNBA.
bout vanun'una vaJoel Embiid: Embiid ine hanzvadzi diki inozivikanwa inozivikanwa inonzi Muriel. Aive zvakare aine munin'ina - Arthur akafira mutsaona yemumugwagwa aine makore 13. Embiid anosuwa munin'ina wake zvakanyanya uye anogovera hukama hwepedyo nasisi vake Muriel.
Nezve hama dzaJoel Embiid: Kure kubva kumhuri yepedyo yaJoel Embiid, hapana zvinyorwa zveababamunini vake nababa nasekuru ivo zvichiri zvishoma zvinozivikanwa nezve babamunini, babamunini, babamunini, babamunini uye babamunini.
Joel Embiid Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi:
Achienderera kuhunhu hwaJoel Embiid, ane hunhu uye hunogadzikana hunhu hunoratidza hunofungidzira, hunhu uye hunhu hwevanhu vanotungamirwa neAcarius Zodiac maitiro.
Iye ari quirky, akasiyana, chiitiko-chinotarisa pachokwadi uye zvine mwero anoratidza ruzivo nezve yake yega neyakavanzika hupenyu. Zvaanofarira uye zvekunakidzwa zvinosanganisira kutamba tenisi nemitambo yemavhidhiyo, kuteerera mimhanzi, kuona mafirimu pamwe nekushandisa nguva neshamwari uye nemhuri.
VERENGA Giannis Antetokounmpo Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Joel Embiid Maitiro ehupenyu:
Iwe unoziva here kuti Joel Embiid ane huwandu hunofungidzirwa hwemadhora 147 miriyoni panguva yekunyora iyi bio? Nzvimbo dzenharembozha yake dzinotora fomu muhomwe uye mumabhizimusi ekupedzisira asi ongororo yemashandisiro ake mari inoratidza kuti anorarama hupenyu hwoumbozha.
Achinongedzera zvinongedzo kuEmbiid hupenyu hwoumbozha anosanganisira yake $ 2.1M fafitera iri pakati peguta Philly pamwe nekusiyana kwakasiyana kwemotokari dzinodhura dzaanoshandisa kufamba mumugwagwa weguta raanogara.
Joel Embiid Untold Chokwadi:
Kuunza yedu Joel Embiid nyaya yehudiki uye biography kumagumo pano zvinhu zvisina kutaurwa kana zvishoma-zvinozivikanwa zvakagadzirirwa kukubatsira iwe kuti utore mufananidzo wake.
Chitendero: Joel Embiid muKristu akazvipira uyo anozivisa neCatholic. Muchokwadi, mutambi webhasikiti akamboenda kunhepfenyuro kuti aratidze kufara kwaakaita kugara pakatarisana naPapa panguva yemasowe muVictoria City.
Chikonzero Chikonzero Chokutamba Nhemberero: Joel Embiid akazvitumidza zita rekuti "Maitiro" nekuti anotenda muhupenyu uye anovimba kuti marwadzo ayo, zvinowana uye zvinofadza ndezvekunaka uye zvinopedzisira zvabatsira mukubudirira nyaya.
Tattoos: Joel Embiid haana kukura pamattoos. Muchokwadi, iye haana kana imwe inki pamuviri wake panguva yekunyora. Kunyange vateveri havana maratidziro ake asi nekuti ivo vanotenda kuti muviri wemuviri haungatenderi kutarisirwa kwake.
Kusvuta uye Kunwa: Embiid mutengesi. Ndiye mumwe anorega kunwa doro uye zvinwiwa. Kunyangwe zvisati zvichizivikanwa kuti Embiid anga aine nhoroondo yakaoma ine zvinwiwa zvakaomesesa uye zvine shuga, teetotalism ine hutano hwako. Haana kupihwa zvakare kuputa uye haasati aonekwa achifemera mweya.
CHOKWADI KUTI: Vongai nekuverenga kwedu Joel Embiid Childhood Nhau uye Untold biography chokwadi. Pahudiki biography, isu tinoedza kururamisa uye kusasarura. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure zvako kana kuti tibate!
Childhood Biography Diary- yeNBA STARS
Bobrisky Nyaya Yehucheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Chokwadi
Naira Marley Nyaya yeUcheche Nyaya pamwe neS Untold Biography Facts
Yemi Osinbajo Kuberekwa Nhau Plus Untold Biography Facts